के अमेरीकी दुताबास संग झगडा परेको थियो आर्यनको ? फेरी भिसा दिएन आर्यनलाइ | kollywood Update
के अमेरीकी दुताबास संग झगडा परेको थियो आर्यनको ? फेरी भिसा दिएन आर्यनलाइ
श्रावण २१ , कलिउड अपडेट ।
नायक आर्यन सिग्देललाइ पुन अमेरीकी राजदुताबासले भिजा रिजेक्ट गरेको छ । अमेरीकि दुताबासले पाचौ पटक उनलाइ रिजेक्ट गरेको छ । ग्लोबल फिल्म अवार्डको लागि उनले भिसाको लागि आबेदन दिएका थिए तर उनि भन्दा कम पपुलर तथा जुनिएर लाइ समेत दिएको भिसा उनलाइ किन दिइएन , यसको पछाडि कुनै रहस्य हुनै पर्छ ।
उनको पासपोर्टमा हरिस सिग्देल नाम भए पनि उनले बिभिन्न संघसस्था बाट नाम भेरिफाइ पक्कै पनी गरेका छन् किनकि अमेरीका बाहेक अरु देश जानलाइ आर्यनलाइ कुनै समस्या छैन ।
कुनै समय आर्यन व्यस्त नायक भएको बेला अमेरीकि दुताबासले भिसा रिजेक्ट गर्दा केहि भनाभन भएको थियो भन्ने बुझिएको छ । श्रोतको अनुसार त्यहि सानो निहुँले अमेरीकाले भिसा नदिएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अवार्डको लागि जान आवेदन दिनेहरुमा नायीका सुरबिना कार्कि , कोरियोग्राफर कबिराज गहतराज , संगितकार ताराप्रकाश लिम्बु , नायक आयुष रिजाल को भिसा रिजेक्ट भएको छ । भिसा पाउनेहरुमा दिपा श्री निरौला , रबिन्द्र खड्का , नवल खड्का , सत्यकला राइ , अनमोल केसि , टिका पहारी , जितु नेपाल , केदार घिमिरे रहेका छन्
ग्लोबल फिल्म अवाडै १९ तारिखमा कोलोराडोमा हुदैछ ।